Mali: Tsy Miraika Manoloana Ny Fanimbàna “mausolées” Ao Tombouctou Izao Tontolo Izao · Global Voices teny Malagasy
Mali: Tsy Miraika Manoloana Ny Fanimbàna “mausolées” Ao Tombouctou Izao Tontolo Izao
Voadika ny 09 Jolay 2012 2:33 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français
Hiditra ao anatin'ny tantaran'i Mali sy ny lova ara-kolontsain'ny zanak'olombelona ny 30 Jona 2012, tahaka ny hoe iray tamin'ireo izay tena namoa-doza indrindra. Ao anatin'izay, ho setrin'ny fandaharan'ny UNESCO an'i Tombouctou, ho ao anatin'ny lisitr'ireo harenan'izao tontolo izao tandindonin-doza, ireo islamista an'i Ansar Dine, iray amin'ireo vondrona mitam-piadiana mifehy ny avaratr'i Mali, dia niditra tamin'ny fanimbàna ireo fasana masin'ny miozolmana (mausolées) tao an-tananan'i Tombouctou.
Ny 30 jona, saharamedias.net dia nanoratra hoe :
Nosimbain'ireo mpiady ireo “mausolées” namboarina ho fasan'ireo olon'ny fahalalàna sy olo-masina nomen'ny mponina haja manokana tao amin'io tanàna manan-tantara io, ka ny tanjony amin'izany dia ny hamàfa izay dindo ahafahana mamantatra an'ireny faritra ireny.
saharamedias.net, izay nanana solontena iray nahita maso ireo fanimbàna, no mizara amintsika ny fanarahana an-jambany nanodidina izao fanimbazimbàna izao :
Nanana endrika manokana ireo fanimbàna ireo. Lehilahy iray misaotra an'Andriamanitra rehefa avy namotika fasana iray izay misongadina kokoa noho ny hafa ; iray hafa midera an'i Allah nanome azy ireo ireny fandresena ireny sy nanome fahafahana azy ireo hampihatra ny Lalàny eto an-tany’ ; ny iray fahatelo izay mihanoka anatin'ny fandreseny sy maniry ny hahita toy izany any amin'ireo firenena miozolmana rehetra.
Na dia ny fanimbàna ny fasana masin'i Saint Sidi Mahmoud Ben Amar aza, efa nizimbazimbaina ihany ny 4 may 2012, no tena miteraka resa-be indrindra, tsy isalasalàna fa tsy ambaka an'izany ny mikasika ireo 15 hafa. Izany mihitsy, araka ny lazain'i Sanda Ould Boumama, mpitondra tenin'ny Ansar Eddine ao Tombouctou, voatanisa ao anaty lahatsoratra iray navoakan'ny senego.com:
Hosimbain'i Ansar Edine androany daholo ireo fasàna masina eto amin'ny tanàna. Izy rehetra tsy an-kanavaka.
Ny tranonkala maghrebemergent.com mihevitra ny hahita vahaolana amin'ity ramatahoran'ny islamista totoafo amin'ireo toerana izay mariky ny fahatsiarovana faobe ho an'ny Maliana ity sy ny maha-isan'ny harena ara-kolontsain'izao tontolo izao azy ireny :
Ankoatra ireo fasana masina, ao amin'ilay faritra dia misy toeram-pandevenana 16 sy fasana masina, izay singa tena manana ny toerany ao amin'ny rafitra ara-pinoana amin'ny lafiny hoe maha arofanina farany azy ireny amin'ny fiarovana ny tanàna amin'ny loza samihafa, araka ny finoan'ny daholobe.
toeram-pikarohana ara-tantara ahmed baba CEDRHAB izay mikendry ny hiarovana ireo toerana manan-tantara ao an-tanànan'i Tombouctou, avy amin'i upyernoz ao amin'ny FlickR, License CC-BY
Marobe ny fanehoan-kevitra ao amin'ny tontolon'ny bilaogy. Ao amin'ny tranonkalan'ny france24.com, Rg isan'ny mpamaky, dia nanoratra hoe :
Toy izao no mahatonga ny fikisahan'ny resa-pinoana ho any amin'ny tsy refesi-mandidy. Tany andrefana, niainana ny “inquisition” (Avy amin'ny mpandika: rafi-pitsarana teo ambany fiahian'ny rafi-pinoana, notantanan'ny Papa), tany Shina dia nisy ny revolisiona ara-kolontsaina, sns…
Ao amin'ny vavahadin-tseraseran'ny gazety frantsay mpiseho isan'andro, lemonde.fr, anisan'ireo mpandray anjara azo tanisaina i Michèle FAUDRIN izay nanoratra hoe :
Nanimba tsangambato marobe ireo islamista…fandoroana amin'ny afo! Hantsana no eo anelanelan'izy ireo sy isika ; tsy misy fandeferana izy ireo, isika miezaka ny handefitra. Tsy tantin-dry zareo ny fandeferantsika, tsy tantintsika kosa ny tsy fandeferan-dry zareo.
Tamin'ny fanehoana hevitra mikasika lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny tempsreel.nouvelobs.com, nouen marie-claude dia nanambara ny tahony toy izao :
Mampalahelo loatra ! Tsy hita izay teny enti-milaza ny hadalàna toy izany ! …… Efa misy an-dry zareo any Afghanistan , Siria , saiky manerana an'i Afrika …. mahatonga ahy hieritreritra ny fony fotoanan'ny ‘nazis’ izay nanomboka ..tamin'ny fandoroana boky ……. Miatrika afobe i Eoropa any amin'ny sisin-dranomasiny any Méditerranée…. narehitr'ireo ‘inquisiteurs’ tamin'ny taonjato faha-21…. Mivarahontsana sy miahiahy !
Maneho hevitra amin'izay lahatsoratra izay ihany dia nanoratra i Kangoo Durant :
Milaza ho manao izany amin'ny anaran'ANDRIAMANITRA ry zareo, nahita an'ANDRAMANITRA ve ireo marary saina ireo???? Tsy maintsy lazaina an-dry zareo ireo fa ANDRIAMANITRA dia manorina fa tsy manimba izay toerana masina natokana ho azy. Saingy alohan'ny zavatra rehetra, dia toeran'ny tantaran-janak'olombelona ireny, misy fanahy miaraka aminy!
Ahmed Mouhlay mihevitra fa:
Raha amin'izao toerana misy azy izao, dia ilaozana ny kianjan'ny finoana/fivavahana mba hidirana ao anatin'ny ara-tsaina. Tsy azo lazaina ho ady ny hetsika ‘mahery vaika’ atao amin'ireny olona ireny, fa toy ny fitsaboana.
Marc Esnoult mino fa:
i Afghanistan vaovao, nefa akaikikaiky kokoa.Tsy dia takatsika tsara loatra ity fanaovana ho tsinontsinona ny tantaran'olo-masina miozolmana tanterahan'ireo islamista mahery fihetsika ity ; mety ho fanehoana ivelany voaràran'ny charia; nazava tsara tao Afghanistan izany tamin'ny fotoana namotehan'ny talibans ireo sarivongana nialoha làlana ny vanim-potoana islamika. Toa hahagaga ihany raha any no tsy hisy toby fanazarantena karazandrazan'ny an'ny Al qaida.
Ao amin'ny Twitter, Totosy de Madecasse™ ‏@Toshikoshi tamin'ny fanehoan-kevitra taminà lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny slateafrique.com dia mihevitra fa hoe:
vonomoka ara-kolontsaina no nitranga tao #Tombouctou -http://goo.gl/XKRzX
Mbola tao amin'ny Twitter hatrany, hdstanton ‏@hdstanton1 mamintina hoe :
#Tombouctou Ankoatry ny fanimbàna ireo fasàna masina, te-hampiseho ireo islamista fa hoe hopetehin-dry zareo izay sivilizationa tsy avy amin'ny foto-pinoan-dry zareo.
Ity fanehoan-kevitr'i Toni972 nivoaka ny 24 may lasa teo ity, tao amin'ny vavahadin-tseraseran'ny rfi.fr, taorian'ireo heloka bevava voalohany nataon'ireo mahery fihetsika, dia mbola mitazona hatrany ny toerany eo amin'ny vaovao, sady mamintina ny toerana misy ny governemanta maliana, ngoly tsy mahefa na inona na inona, sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena izay miforitra anaty fahanginan'ny marenina :
Fa vao mainka mampitroatra ny hoe tsy afaka manao na inona na inona hiadiana amin'ny fomba mahomby amin'ireo tsy hay hoe avy aiza ireo ny governemanta maliana, nefa mahafantatra tsara fa ny hany vahaolana hamongorana azy ireo dia ny ady mitam-piadiana tsy misy antra. Tsy misy fifampiraharahana atao aminà mpampihorohoro izany, tonga dia vonoina sy foanana ankitsirano sy tsotra izao ry zareo. Mba hisy anie ny firotsahana an-tsehatra mahery vaika mba hiverenan'ireny faritra ireny ho faritra afaka indray.
temoust.org, mihevitra fa :
Amin'ireo rehetra ireo, ny zava-misy iainan'i Tombouctou dia tsy hoe raharaha anatiny ihany ao Mali. Mahaliana an'izao tontolo izao manontolo mihitsy izy io satria amin'ity indray mitoraka ity, tsy hoe fandroahana mpanao jadona iray fotsiny, fa tena famafàna ny dian-tongotr'olombelona iray manontolo mihitsy, ny fahatsiarovany, ny fombam-pinoany, ny fomban-drazany, ny fiteniny ary, mazava loatra, ny mety ho tombony na fatiantoka, ny fahafatesan'ny iray amin'ireo tanàna izay ny fasana masina sy ny trano fonenan'ireo vatan-dehilahy amam-behivavy dia mitodika mankany amin'ny tany hay avokoa.
Mandritra ny fanehoan'ny Tale Jeneralin'ny UNESCO, Irina Bokova, ny fahaverezan-keviny sy ny alahelony lalina, tohizan'ireo islamista ny asa fanimbàna sy ny famoretana ny vahoaka amin'ny alàlan'ny sharia, no sady manamafy hatrany ny ara-tafika ry zareo amin'ny fahatongavan'ireo andiany vaovao. Ny tranonkala malikounda.com dia mitatitra ny fahatongavan'ireo alzeriana djihadistes efa ho telopolo tao Tombouctou tamin'ny 29 jona.
Ny heloka bevava voalohany dia niteraka hetsika mahery vaika avy amin'ny vahoaka narahan'ny fidinana an-dalambe sy fifandonana tamin'ireo mpanao asa fampihorohoroana. Tamin'ity indray mandeha ity, indrisy, sarotra ho an'ireo vahoaka izay niaina ela tanaty horohoro sy voatampim-bava ny hahita mpitarika hitondra azy ireo aminà hetsi-panoherana vaovao.
3 andro izayBorkina Faso
Jona 2021 33 Lahatsoratra